Vahaolana ho an'ny fihaikana lehibe indrindra ananantsika
Mianara momba ny fitantanana miorina amin'ny fomba fiakarana sy ny fomba ahafahanao mampihatra ny fitsipi-piainana amin'ny asanao
Mifandraisa amin'ny mpitantana & manampahaizana hafa
Manaraha ny vondrom-piarahamonin'ny onjam-peo manerantany an-tserasera amin'ny aterineto
Manorina fahaiza-manao vaovao
Fantaro ny fianarana an-tserasera amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny fifandraisana stratejika, ny fikirakirana ny fikorontanan'ny toetrandro, ary ny fitantanana miorina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamafisana
Hihaona amin'ireo mpitantana
Jereo ny fomba ataon'ny mpitantana manerana izao tontolo izao hiaro ny vatoharanay
Amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera manampahaizana sy manam-pahaizana, ny Reef Resilience Network dia mampifandray ireo olona eo amin'ny andaniny sy ankilany amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina miaraka amin'ireo namana, manam-pahaizana, fitaovana, ary fahaiza-miasa mba hiatrehana ny fandrahonana sy hetsika hanatsarana ny fahasalaman'ny vatohara. Manasa anao izahay hijery ny paikady fitantanana etsy ambany ary hifandray amin'ny Network amin'ny alàlan'ny sehatra fifanakalozan-kevitra an-tserasera.
Inona ny RBM ary ahoana no ahafahanao mampihatra ny fitsipiky ny RBM amin'ny asanao?
Paikady amin'ny fitantanana ny fandrahonana eo an-toerana toy ny fiantraika amin'ny tany, ireo biby mpiremby haran-dranomasina, ary ny aretina.
Manorà drafitra fifandraisana stratejika amin'ny tetikasam-piarovana.
Ny siansa farany paikady sy paikady farany hanampiana ireo mpitantana an-dranomasina hiatrika ny fandrahonana ny haran-dranomasina sy ny olona avy amin'ny rano maloto.
Fantaro ny fomba hanamboarana sy hitantanana ireo faritra voaaro azo antoka ho an'ny fanohanana ny haran-dranomasina.
Mikaroha fitaovana hanombanana ny marefo sy ny toro-hevitra amin'ny fifandraisana mahomby amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Loharano fototra amin'ny fizahan-tany maharitra ao anatin'izany ny maodely hitantana ny fizahantany, ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany ary ny fivelomana isan-karazany.
Amboary ny haran-dranomasina, ampiasao ny firafitra artifisialy ary manatsara ny programa famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fanao tsara indrindra manerantany.
Mianara momba ny fiompiana anaty akondro amin'ny tontolo iainana akorofika, mifantoka manokana amin'ny fiompiana trondro.
"Ny tranokala Reef Resilience dia tranonkalan'ny goto ho an'ny academics, ny mpitantana sy ny mpitsabo tena liana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiarovana na ny famerenana indray ny haran-dranomasina."
Lab ao amin'ny Fikarohana momba ny fiarovana ny valan-jiro, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México
amin'ireo firenena 103 sy faritany misy haran-dranomasina no nahazo fiofanana ref
Mpitantana sy mpitsabo izay nandray anjara tamin'ny fampiofanana an-tserasera, webinar, ary / na atrikasa manokana ref
Ny olona dia miditra amin'ny aterineto isan-kerinandro ref